Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny viriosy mahatsiravina COVID any India dia mangataka fanitsiana ataon'ireo kaompaniam-pitaterana manerantany
Avelao hisokatra ny seza afovoany. Ity sy ireo fepetra hafa dia entanin'ny Flyers Rights any Etazonia, saingy tokony ho lasa antso manerantany ho an'ny fiarovana bebe kokoa miaraka amin'ny virus COVID mutation indroa i India.
Ny variant India COVID-19 dia mitondra mutation roa ao anatin'izany ny L452R sy E484Q izay hita misaraka teo aloha amin'ny variants hafa fa tsy miaraka amin'ny variant iray.
Manoloana ny fiparitahan'ny karazany B1.617 COVID, nanavao ny antso i FlyersRights ny hisian'ny halavirana ara-tsosialy amin'ny fiaramanidina sy ny seranam-piaramanidina any Etazonia, ny fizahana ny mari-pana, ny fitsapana haingana ary ny fanilihana ny saram-panovana. ny Tambajotra fizahan-tany manerantany maniry ny IATA sy ny ICAO handray an-tanana an'ity hetsika ity amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Tao amin'ny taratasy iray an'ny sekreteran'ny departemanta amerikana Pete Buttigieg sy Administrator FAA Steve Dickson, nanasongadina ny fomba nanehoan'ny fanadihadiana fa ny fanakanana ny seza afovoany dia mampihena be ny fihanaky ny COVID-19.
Ny departemanta misahana ny fahasalamana sy ny asa maha-olona any Michigan dia nanambara ny zoma fa ny fanjakana dia nanamafy ny tranga voalohany tamin'ny fiovan'ny India an'ny COVID-19 B1.617, izay nantsoina hoe "mutant roa tonta".
Miasa manohitra azy io dia kinova fanovana roa sosona an'ny virus COVID-19 mahafaty nahatonga azy hiparitaka haingana kokoa sy maty kokoa. Any India, ity kinova ity dia namono olona maherin'ny 200,000 hatramin'ny alarobia ary nanisa fatratra 362,757 XNUMX ny aretina vaovao mbola tsy hita tao anatin'ny iray andro monja.
US-monina Fikambanana Flyers Rights teo ambanin'ny fitarihan'ny mpisolovava Paul Hudson dia nampaneno ny lakolosy fanairana nanintona ireo zotram-piaramanidina mba hanampiana endrika fiarovana. Ho an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikanina dia maniry ny hisokafan'ny seza afovoany indray i Hudson sy ny fepetra fanampiny hiantohana ny fisian'ny elanelana lavitra amin'ny seranam-piaramanidina sy seranam-piaramanidina.
Amin'izao fotoana izao dia maro ny zotram-piaramanidina manidina amin'ny fahaizany amin'ny sidina mpandeha any Etazonia. Ny fitsangatsanganana fialan-tsasatra dia nihanaita fatratra.
Na dia mifandray manokana amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikana fotsiny aza ny Flyers Rights, dia nanako ny fangatahana hampiharina manerantany sy fiaraha-miasa manerantany ny World Tourism Network. Tambajotra fizahan-tany manerantany dia mangataka IATA sy ICAO hanohana ny Flyers Rights.
Flyers Rights dia nandefa ity taratasy maika ity tamin'ny sekreteran'ny fitaterana amerikana Pete Buttigieg:
Vakio ny litera feno amin'ny pejy MANARAKA.